Fungicide, antsoina koa hoe antimycotic, izay fanafody misy poizina ampiasaina hamonoana na hanakanana ny fitomboan'ny holatra. Ny fungisides dia matetika ampiasaina hifehezana ny holatra parasito izay mety hanimba ny toekarena na ny zavamaniry haingo na hanimba ny fahasalaman'ny biby fiompy na olona. Ny ankamaroan'ny fambolena sy ...
Mampiasà fungicides ho fiarovana ny hoditry ny paoma alohan'ny fotoana mialoha ny aretina
Ny hafanana maharitra eto Michigan amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nisy toa izany ary nahagaga ny maro ny amin'ny fivoaran'ny paoma haingana. Miaraka amin'ny orana mialoha ny zoma 23 martsa ary amin'ny herinandro ho avy dia zava-dehibe ny fiarovana ireo mpamboly mora voan'ny aretin-koditra amin'ity ...
Fanavaozana biocides sy fungicides
Ny biocides dia singa miaro ampiasaina hanakanana ny fitomboan'ny bakteria sy ny zavamiaina manimba hafa, ao anatin'izany ny holatra. Ny biocides dia misy endrika isan-karazany, toy ny halogen na metallic compound, asidra organika ary organosulfurs. Ny tsirairay dia manana anjara toerana lehibe amin'ny loko sy ny fonosana, ny rano ...
Fifantohana fitantanana peste mifangaro ao amin'ny Greenhouse Growers Expo 2017
Ny fotoam-pianarana ao amin'ny 2017 Greenhouse Growers Expo 2017 dia manolotra fanavaozana sy teknika mipoitra amin'ny famokarana voly trano fandraisam-bahiny izay manome fahafaham-po ny fahalianan'ny mpanjifa. Nandritra ny folo taona lasa teo dia nisy ny fahalianan'ny daholobe tsy tapaka momba ny fomba sy toerana anaovan'ny entam-barotra fambolena ...